Cali Gacal oo ka hadlay Doorashada Galmudug - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Cali Gacal oo ka hadlay Doorashada Galmudug
Cali Gacal oo ka hadlay Doorashada Galmudug
May 26, 2019 admin460
Guddoomiyaha baarlamaanka Maamulka Galmudug ee fadhigiisu yahay Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa eedeyn kulul uu u jeediyey dowlad goboleedka Puntland iyo qaar ka mid ah Madaxda Xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira.
Shir Jaraa’id uu u qabtay Warbaahinta ayuu ku sheegay in Maamulka Puntland iyo qaar ka mid ah Xisbiyada Siyaasadeed ee dalka ay wadaan faragelin ay ku hayaan Siyaasada arrimaha gudaha ee Galmudug,waxaana uu ka dalbaday inay joojiyaan.
Waxaa sidoo kale uu sheegay in kulan ay yeesheen Xildhibaanada Galmudug iyo guddoonkooda ay soo dhaweeynayaan habraaca doorashada Dowlad goboleedyada oo ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya.
Waxaa kaloo uu sheegay in guddoonka Baarlamaanka Galmudug iyo Xildhibaanada ay dalbanayaan in cidii aan isku soo dhaweyneynin Madaxda Galmudug aysan kala fogeen,isaga oo eedeyn kulul u jeediyey Maamulka Puntland iyo Xisbiyada qaar.
Hadalkaan kasoo baxay Guddoomiyaha baarlamaanka Maamulka Galmudug weli wax jawaab ah kama bixin Maamulka Puntland iyo qaar ka mid ah Xisbiyada dalka ka jira oo uu Eedeynta u jeediyay.
Halkaan ka daawo Shirka jaraa’id Cali Gacal
Yariisow oo Shaqajoojin ku sameeyey ku xigeenkiisa
February 4, 2017 February 5, 2017 Duceysane
Sawirro: Ganacsade Xasan Qonjor oo 74 booyadood oo biyo ah ugu deeqay tuulooyinka degmada Cadaado